January 26, 2021 Xuseen 9
Puntlandtimes (Muqdisho)-Waxaa maanta ay ku beegnayd 26-ka January oo ku beegan 30 sano kadib markii uu Muqdisho isaga baxay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allaha u Naxariistee Jaalle Maxamed Siyaad Barre oo muddo dalka ka soo arriminayey.
Wixii intaasi ka dambeeyey waxaa dalka Soomaaliya uu la daalaa dhacayaa dagaalo sokeeye, xalisilooni darro siyaasadeed iyo dhibaatooyin sababay barakac, dhimasho iyo in dadka Soomaaliyeed ay aad u kala fogaadaan.
Haddaba Nabadoon Cabdullaahi Maxamuud Jibriil oo kamid ah isimada Puntland waxa uu si adag ula hadlay siyaasiyiinta ka soo jeeda magaalada Muqdisho ee ku hanjabaya in lagu laaban doono 1991-dii xilligaasi oo xukunka xoog looga tuuray Maxamed Siyaad Barre.
Waxa uu sheegay in xilligaasi Muqdisho ay ahayd magaalo la wada degan yahay hantida lagu bilili qaystayna inteeda badan ay lahaayeen reer Puntland haseyeeshee xilligaan waxbadan isbedeleen dhibka ka dhaca Muqdishana uu saamayn doono kuwa dagaalka ku goodaniya.
Waxaan maqlay sheekadaan:
Siyaad Barre markuu burburiyay jabhadii SSDF iyo markuu dukumdaakum ka dhigay Hargeysa oo waddanka ka saaray SNM ayaa waxuu maqlay in Hawiye rabo in uu sameysto jabhad hubeysan. Markaas ayuu hal maalin iskuugu yeeray odayaashii Hawiye oo degganaa magaalada Muqdisho markaas ayuu dayuurad in uu saaray oo dul mariyay magaaladii Hargeysa uuna soo tusay sida uu u burburiyay markaas ayaa dayuuraddi odayadi dib Muqdisho ugu soo celisay si toosna loo geeyay xafiiskii Siyaad Baree.
Siyaad Barre ayaa odayadi ku yiri waxaan maqlay Hawiyoow in aad jabhad hubeysan rabtiin in aad sameysiine ee ogaada hadii aad taas sameysiin Muqdishana waxaan ka dhigayaa sida Hargeysa aan ka dhigay.
Oday odayada ka mid ah ayaa ku yiri: “marka hore waan ku faraxsanhay in aad horteena ku qiratay in aad Hargeysa sidaas u gashay haddana waxaan kaa codsaneynaa in Muqdisho sidoo kale u burburi ee goofkee aahaan jirtay ku celi annagaa kaliya ayaan dib u dhisaneyno”.
Marka sheekadaan waxaan ku keenay Muqdisho maanta Hawiye ayaa dib u dhistay oo maanta xoolaha yaalo waa xoolahooda marka kuwaan calaacalaayo Nabar iyo Naxdin kama naxayaan Muqdisho haddan kama naxayaan Hawiye ee maxaa hayo? Baroorta Orgiga ka weyn.
Shacabka ayeey ku beerlaxawsanayaan Farmaajo ha joogo ama 1991 ayaa loo noqonayaa. Farmaajo haduunan qaadanin boorsadiisa Feb.8,2021 ka hor waxuu ku tago waa loo hayaa. KKKKKKKKKKK
1991 waa gartood HAWIYE lagalama xisaabtamin Mididii ay Somali ku gowraceen “ DIBIR GOYNTA DAAROOD” ma Daarood baa wax u dhimay iyaguba dhibaney ahaayeen oo xataa maanta ma sheegan karaan “XASUUQII HALABJA OF SOMALIA” 1019 person died in a poison attack what’s now is puntaland especially in Nugal valley, 9 districts Galkacyo 12 districts, Sool 4 districts. 1019 people drank water that has been poisoned. Markaa waxaa loo aaneynayey SSDF ragii dhibkaas geystay sida la xaqiijiyey waxaa ka mid Colonel ka Somaliland ugu magacaaban wasiirka arimaha gudaha. General Dhagaweyne wuxuu xaqiijiyey cidankii dhibkaas geystay dhamaantood inay ahaayeen HAWIYE iyo ISAAQ ragii hogaaminayey 3X baanu VICTIM noqonay (Xasuuqii Siyaad bare ciidinkii Somali oo dhan) “ Xasuuqii HAWIYE ee ugu yeereen DIBIRGOYNTA DAAROOD balse ay ku Gowraceen Somali oo dhan ceelna ugu ridideen jiritaankii umadeed. BEESHA ISAAQ oo marna Victim Daarood iska dhigeysa marka shaatiga shaydaanka soo gashaneysa oo ilaa iyo maanta nala daba taagan QARAXYO, barakicin mid DAD IYO MID DEEGAAN. Maxaynu ka yeelnaa somalaay see baan u xisaabtanaa I’m the real victim since 1991 haday Hawiye iyo Isaaq xoroobeen 1991 anaku goormaan ka xoroobeynaa xasuuqooda sharkooda iyo shidadooda.
Su’aasha ah odayada Daaroodow ka jawaaba awoowayashayo ma Hawiye iyo beesha Isaaq miyey gumeysan jireen? Mise taariikhda Somali u qoran ayaa loo arkay qabiil Waxaan maqlay caruurta hargeysa iyo burco iyo Berbera menhajka wax lagu baro kama heleysid taariikhda gumeystihii iyo sayidkii dhexmartay toona. Laakiin had iyo gooraale waxaan aragnaa caruur naceyb lagu beerayo school lada wax barashada haday tahay media ha haday tahay oo la nacsiinayo magac Somali ha la’is jiro jiil naceyb la koray oo halis ah baa soo socda. Dadka dega Gobalka BARI khaasatan reer Bossaso amaankiina iyo wada jirkiina adkaysta idinka dhexdiina maxaa iskugu mashquulsantihiin 1993 baa shaatiga shaydaanka la’idin gashanayey oo la’idin kaga soo haajiriyey BURCO HASSAN DAAHIR AWEYS. War wax fahma oo amaankiina adkeysta. Dadka Reer SANAAG war idina wax fahma oo shaatiga shaydaanka ee dadkiina lagu xasuuqay mid dad iyo mid Deegaan dib u dhaceen gacan adag ku qabta. Xinka inanka dhexdeena ah waxaa tusaale idinkugu filan XAABSADE bal eega maanta 2021 dib u dhaca mid Deegaan mid dad oo inooga habsaday dhibacaas war caqligiina koriya oo ka gudba waxaan oo dhulkiina nafsiga ka saara waad ogtihiin markaan HABQANKA ugu soo noqonay deeganadeena say ahaayeen garta ineynu ka dhigi karno meesha aduunka ugu wanaagsan uguna horumarsan, nolol quality lehna loogu noolaan karo inta midna dhulkiisa Horgale yahay midna xin ku jiro lama nafsi saaro pubtland ee maskaxdiiba koriya kana gudba caqabadan mid soo foodleh iyo mid taagan.
Dhibka Somaaliya dhan waa Daarood vs Daarood run laysuma sheegin.
Issaq iyo Daarood waa wada degaa dhib weyn kama dhaxeeyo
Hawiye iyo Mareexaan waa wada degaan dhib weyn kama dhaxeeyo
Hawiye iyo Majeerteen waa wada degaan dhib weyn kama dhaxeeyo
Laakiin dhib oo idil waa Daarood vs Daarood
Bal fiirso waxa Jubbaland ka socdo Ogaadeen oo Kenyaati wata Mareexaan oo Ethiopian wata.
Siyaad Barre xukunkiisa waxaa duulaan ku soo qaaday oo u horeeyay Majeerteen
Majeerteen yeey soo kaxeeysteen Ethiopian against whole Somaliya
Issaq dhexdiisa wuu diriraa waligiis Ethiopian isuma soo kaxeysto Daaroodna isuma soo kaxeysto.
Hawiye dhexdiisa wuu diriraa waligiisna Ethiopian iyo Kenyaati isu soo kaxeysto, Daaroodna isuma soo kaxeysto.
Darood vs Daarood waxaa dhexmaro cadowtanimada oo ugu xun oo Gaalo isusoo kaxeysto.
Siyaad Barre markuu SSDF la diriraayay waxuu u diray Madaxweyne ku xikeenka dowladdiisa Axmed Saleebaan Dafle in uu ka dagaalamo Gaalkacyo.
Axmed Saleebaan Dafle waa nin Daarood ah, Kablalax ah, Koombe ah, Harti ah, Dhulbahante ah waxuuna la diraraa Majeeteen.
Markuu Gaalkacyo tagay waxuu ku qudbeeyay in Majeerteen dhiigooda xalaal yahay, Xoolahooda xalaal yahay, gabdhahooda in la kufsan karo.
This a written history I am not making up. Please Daaroodoow marka hore inta aad qof eedsanin idinka isa soo nadiifiya. Meelkasto aad joogtiin caddaalad ka sameeya wallaahi umadaha kale Hawiye, Issaqa, Dir, Digil iyo Mirifle waa dad raali ka ah in nabad ku noolaadaan oo lala degi karo.
Daaroodoow waa kaas hal magaalo aad u dhantihiin si caddaalad ah ku wad dega.
Issaq kasto Harteysa nabad ayeey ku wada deggan yahiin.
Hawiye kasto Muqdisho nabad ayeey ku wada deggan yahiin.
Digil iyo Mirifle kasto Baydhabo ayeey nabad ku wada deggan yahiin.
Daaroodoow waakaas ha la idin ka helo hal magaalo nabad ku wada dega idinkoo isku amar ku taagleen.
Waa xujo idin haysato.
True inaan isku xoogbafanahay oo is ximino balse su’aasha waxay tahay maskaxdooda ma korinayaan oo ma bacayaan inay Horgale nin asaagood ah u noqdaan ama shaatiga shaydaanka ee lagu xasuuqo dadkooda marka hore TAAKO adag iskaga dhigaan oo yidhahdaan bal horta la’aad meel kale Deegaan kaygii baa dib dhacay mid dad iyo mid Deegaan.
Waad mahadsanthay aragtidaada aad ii soo gudbisay, aniga igama ahayn in qof iyo reer xumeeyo waxeey iga aheed in qaladka jiro iftiimiyo. Wallaahi xumaato igama aha ee waxaan jeclahay in qof walba ama reer walba qaladkeeda sida eey u sixi laheed mashquul ku noqoto. Sheekadeyda meeshaas ayaan ku xiraa.
Soomaali oo dhan waxaan u rajeynayaa khayr. WBT
Daarihii hawiye dunshay 1991 dad iyaga ahayn baa lahaa, dadkay laayeen ama qaxiyeena ayaga maahayn, marka saasay uga badbaadeen dhibkii 1991 ,kan hada MOGADISHU ka dhacaa wuxuu noqon doonaa mid xaafadeed..
dhamaantiin wax wanaagsan ku hadli maysaan macaa nabadoonka dadka soomaaliyeed maanta uma baahna hadalo isku diraya ee waxay ubaahanyihiin in la isu soo jiido la isu soo dhaweeyo lana xasuusnaado in wixii dhacay somali ay ku wada dhaceen dhibkuna ina wada saameeyey loona baahanyahay inay inoo noqoto cashar aan ka barano khaladaadkii dhacay inaanaan u noqon wadadii aynu ku aduun iyo aakhiroba seegnay allaah ha laga baqo qof walbow qabri kaligaa lagu galinayo ayaa kaa dambeeya waxaana ku raacaya camalkaaga oo kaliya qabiilna waxba kuu qabanmayo
Waxaad moodaa in gidigiin jibo Isaaq idin hayso, ee iska soo hadaqa saarka waa ladinka tumiye. Ina gumeed hadal naxlileh lagama waayo.